Arc ၏ဂျုံး - Orleans ၏အိမ်ဖော်
Arc ၏ဂျုံး, ဒါမှမဟုတ် Jeanne d'Arc, သူမဘုရားသခငျ့အသံကိုကြားဟုဆိုကာသူမ၏န်းကျင်တစ်အင်အားစုတည်ဆောက်ရန်ပြင်သစ်ရာဇပလ္လင်တစ်ခုအပူတပြင်းအမွေဆက်ခံသူဆွဲဆောင်စည်းရုံးဖို့စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်ပြင်သစ်တောင်သူလယ်သမားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည် Orleans များ၏ဝိုင်းရံမှာအင်္ဂလိပ်လုပ်ကြံ။ အမွေခံမြင်ပြီးနောက်သူမ, ဖမ်းကြိုးစားခဲ့နှင့်ယူဖောက်ပြန်မှုအတွက်သေဒဏ်စီရင်ခံခဲ့ရသည်သရဖူဆောင်း။ တစ်ဦးကပြင်သစ်အိုင်ကွန်သူမကကိုလည်းအိမ်ဖော်အဖြစ် English သို့ဘာသာပြန်ပြီးပါပြီရာ, La Pucelle, အဖြစ်လူသိများပေမယ့်အချိန်ကအပျိုစင်မှ connotations ခဲ့ရတယ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေဂျုံးတိုတောင်းတဲ့သက်တမ်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုရုပ်သေးအဖြစ်အသုံးပြုမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမကျန်းမမာလူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ပြီးတော့ကြာကြာသက်ရောက်မှုများအတွက်ဘေးဖယ်သွန်းလေ၏။
1337 ခုနှစ်တွင်ပဒေသရာဇ်အခွင့်အရေးနှင့်မြေယာကိစ္စနှင့် ပတ်သက်. အငြင်းပွားမှုအင်္ဂလန်နှင့်ဦးဆောင် အက်ဒွပ် III ကို ပြင်သစ်နှင့်အတူစစ်သို့။ အဘယ်အရာကိုယခင်အငြင်းပွားမှုများမှဤကွဲပြားခြားနားသောလုပ်အင်္ဂလိပ်ရှင်ဘုရင်က, အက်ဒွပ် III ကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်, သူ့မိခင်ရဲ့ဖြစ်မဖြစ်ကိုသွေးမှတဆင့်မိမိကိုမိမိအဘို့ပြင်သစ်ရာဇပလ္လင်ပြောဆိုထားသည်။ အဆိုပါ အနှစ်တရာစစ်ပွဲ ပြန်များနှင့်ထွက်အရှိန်ကျသွားပေမဲ့, ဒါပေမယ့်အင်္ဂလန်ရဲ့ဟင်နရီ V ကို၏အောင်မြင်မှုများပြီးနောက်, 1420 နေဖြင့်အင်္ဂလန်အနိုင်ရခံရဖို့ထင်ရှား။ , သူတို့ကအတူတကွမိမိတို့၏မဟာမိတ်များ - အစွမ်းထက်ပြင်သစ်အဖွဲ့ခွဲဟာ Burgundians ဟုခေါ်တွင် - တစ်ဦးကို dual -Anglo-ပြင်သစ်ဧကရာဇ်အောက်မှာပြင်သစ်၏ကျယ်ပြန့်ဒေသများအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ထောက်ခံ ချားလ်စ် , ပြင်သစ်ရာဇပလ္လင်မှပြင်သစ်အရေးဆိုသူကား, မိမိမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရပ်တန့်ခဲ့သည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့နှစ်ဖက်စလုံးကရန်ပုံငွေလိုအပ်ချက်ရှိကြ၏။ 1428 ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလိပ်ချားလ်စ် '' ပိုင်နက်သို့ထပ်မံတွန်းအားပေးရန် Springboard အဖြစ်ဝိုင်းထားခြင်း Orleans မှစတင်ခဲ့သည်။ အင်ျဂလိမြို့ကိုဝိုင်းထားတပ်ဖွဲ့များသည်ငွေကိုအပူတပြင်းနှင့်ပိုပြီးယောက်ျား၏လိုအပ်မှုရှိကြ၏သော်လည်း, အဘယ်သူမျှမကအဓိကကယ်ဆယ်ရေးချားလ်စ်ကနေလာမည့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Arc ၏ဂျုံးပြင်သစ်၏ရှန်ပိန်ဒေသတွင်း၌Domrémyများ၏ရွာများတွင်လယ်သမားများအားတစ်ချိန်ချိန်တွင် 1412 ခုနှစ်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်ဦး cowherd အဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ပင်မိန်းကလေးတစ်ဦးအဖြစ်အသင်းတော်၌များစွာသောနာရီဖြုန်း, ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်း၏သူမ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောအဆင့်ဆင့်များအတွက်မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ သူမသည်ရူပါရုံကိုမြင်မှစတင်ခဲ့ပြီးသူမအသံကိုကြားယုံကြည်ပါတယ်ပါမယ်ငျးမိက်ခလေ, အာလေဇန္ဒစိန့်ကက်သရင်း၏, နှင့်အန္တိအုတ်မြို့သို့၏စိန့်မာဂရက်။ ၎င်းတို့သည်ဝိုင်းထားခြင်းသို့မဟုတ် Orleans မြှင့်သွားကြဖို့သူမကိုပြောပြခဲ့ကြသည်ရှိရာအမှတ်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ Vaucouleurs - - တစ်ဦးဦးလေးချားလ်စ်အပေါ်သစ္စာအနီးဆုံးရဲတိုက်မှသူ့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးနောက်နှောင်းပိုင်းတွင် 1428 ခုနှစ်ကသူချားလ်စ်ကြည့်ဖို့တောငျးဆိုပြီးနောက်ငါလွှတ်လိုက်၏, ဒါပေမယ့်သူမသိပ်အဖန်ဖန်ပြန် လာ. သဘောကျဖြစ်စေ, ဒါမှမဟုတ်အစွမ်းထက်ကျောထောက်နောက်ခံ၏မျက်စိရရှိခဲ့သူမကြောင့် Chinon ထံသို့စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ချားလ်စ်သူမ၏ဝန်ခံဖို့ရှိမရှိ၏ပထမဦးဆုံးမသေချာမှာပေမယ့်, ကာလ၏စုံတွဲတစ်တွဲပြီးနောက်, သူပြုလေ၏။ သူမသညျဘုရားသခငျအင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်သူ့ကို Rheims မှာရှငျဘုရငျကိုသရဖူဆောင်းကြည့်ဖို့နှစ်ဦးစလုံးသူမကိုစလှေတျခဲ့ကွောငျးချားလ်စ်ရှင်းပြတစ်ဦးသောသူကဲ့သို့ဝတ်ဆင်။ ဒါဟာပြင်သစ်ရှင်ဘုရင်၏အလှည့်ခံရသောအဘို့အစဉ်အလာတည်နေရာခဲ့ပေမယ့်အင်္ဂလိပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းရှိကြီးနှင့်ချားလ်စ် uncrowned နျြရစျ။ ဂျုံးသာချားလ်စ် '' အဖေကပစ်မှတ်ထားခဲ့သော်လည်းတဦးတည်းသောဘုရားသခင်ထံမှမက်ဆေ့ခ်ျကိုရောက်စေဖို့ဟုဆိုကာအမျိုးသမီးဘာသာရေးတစ်လိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ခဲ့ပေမယ့်ဂျုံးပိုကြီးတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘုရားကနေမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိရန်ဟုဆိုကာမည်သူမဆိုများအတွက်အလွန်အစစ်အမှန်အန္တရာယ် - - သူမတစ်ဦးယူမှားသူအဖြစ်စိတ်ကောင်းသောနှင့်မနှစ်ဦးစလုံးခဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သူကိုချားလ်စ်နဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ Poitiers မှာဓမ်မပညာရှငျမြားကတစ်စာမေးပွဲပြီးနောက်ချားလ်စ်သူမကွိုးစားနိုင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကျော်သောအင်္ဂလိပ်လက်တောင်းဆိုတဲ့စာတစ်စောင်ပို့ခြင်းပြီးနောက်, ဂျုံးလက်နက်တို့ကိုဝတ်ဆင်ပြီးနှင့်Alençon၏ Duke နဲ့သဖြင့်စစ် Orleans တွင်ထွက်ထားကြ၏။
အင်ျဂလိ Orleans ဝိုင်းခဲ့ကြပေမယ့်အပြည့်အဝကဝိုငျးနိုင်ဘူးနှင့်မြို့စောင့်ကြည့်နေစဉ်အတွင်းဦးသေဆုံးသူတို့၏နိုင်ခဲ့တပ်မှူးကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။ အကျိုးဆက်အားဂျုံးနှင့်Alençonဧပြီလ 30 ရက် 1429 ရက်တွင်အတွင်းမှရနိုင်ခဲ့ကြသည်, မေလ၏ 3rd အပေါ်၎င်းတို့၏စစ်တပ်များ၏အမြောက်အများအားဖြင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ရက်အတွင်း၎င်းတို့၏တပ်ဖွဲ့များအင်္ဂလိပ်စပ်နှင့်ကာကွယ်ရေးဖမ်းမိခြင်းနှင့်ထိထိရောက်ရောက်အင်္ဂလိပ်တစ်ဦးအစေးစစ်တိုက်သို့ဂျုံးနှင့်Alençonထွက်ဆွဲရန်ကြိုးစားနေပြီးနောက်စွန့်ပစ်သောဝိုင်းထားခြင်း, ကျိုးပဲ့ခဲ့သည်။ သူတို့ကငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ဤသည်ကိုအလွန်ချားလ်စ်နှင့်သူ၏မဟာမိတ်များ၏စိတ်ဓာတ်မြှင်။ ပြင်သစ်ထက်သေးငယ်တဦးတည်းဆိုသော်ငြား - - ဂျုံးနောက်တဖန်အောင်ပွဲကတိပေးမှသူမ၏ဆန်းကြယ်မှုများရူပါရုံကိုသုံးပြီးမှစစ်တပ်ကအရှင်ပင် Patay မှာသူတို့ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သောအင်္ဂလိပ်အင်အားသုံးချေမှုန်း, အင်္ဂလိပ်ကနေမြေယာနှင့် strongpoint ပြန်လည်သိမ်းယူရေးပေါ်တွင်သယ်ဆောင်။
အင်ျဂလိဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ဘက်အမှုအရာပေါ်ခဲ့ဟုယုံကြည်ခဲ့ကြရတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအတွက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ခံရဖို့သလိုပဲနှင့်ချားလ်စ် '' ထောက်ခံသူများဂျုံးဘယျသူမှမအောငျထင်။ သူမသည်ယခုအချိန်တွင်များအတွက်အင်္ဂလိပ်, ပြင်သစ်မြို့တော်ပဲရစ်ထွက်ခွာသို့ချားလ်စ်ပြောဆိုသောနှင့်ထိုကဲ့သို့သောသှေးဆောငျခဏယူပေမယ့်အစား, Rheims သွားပါ။ အဆုံး၌သူဖြစ်ကောင်း 12000 ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေခြင်းနှင့်လမ်းတစ်လျှောက်လက်နက်ချလက်ခံ, Rheims များအတွက်အင်္ဂလိပ်ပိုင်နက်မှတဆင့်ချီတက်နှင့်ဂျုံးအမှန်ပင်မသေချာမရေရာဂျုံးသူမလိုချားလ်စ်ပြောသည်ဖူးခြင်းရှိမရှိအဖြစ်ရှိပါသည်ဇူလိုင်လ 17 1429. အပေါ်သူ့ကိုပြင်သစ်ဘုရင်အဖြစ်သရဖူဆောင်းကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြ သူ့ကို Orleans မတိုင်မီသရဖူဆောင်း, ဒါမှမဟုတ်သူမသာသူမ၏ကနဦးရဲ့အောင်မြင်မှုအပြီးဒီကပြောကြားခဲ့သည်ရှိမရှိကြည့်ပါ။
သို့သျောလညျး, ပဲရစ်တခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်မှုပျက်ကွက်အဖြစ်ဘယျသူမှမအောငျ '' အိမ်ဖော် '' ၏ပုံသဏ်ဌာမကြာမီ, ကျိုးပဲ့ခြင်း, ဂျုံးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ ချားလ်စ်ထို့နောက်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးရှာနဲ့ Joan သခင်ဘုရား Albret နှင့်ရောထွေးအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအခြားနေရာများတွင်စည်းရုံးရေးမှသေးငယ်တဲ့စစ်တပ်နှင့်အတူပယ်ထုပ်ပိုးခဲ့သည်။ နောက်နှစ်ဂျုံးမေလ 24 ရက်နေ့ 1430 တွင်, ဂျုံး Burgundian တပ်ဖွဲ့များကတိုက်ပွဲမှာအတွက်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ရှိရာ, ထိုOïse၏ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းခဲ့သည်။ နှောင်းပိုင်းတွင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲရစ်တက္ကသိုလ်မှာဘာသာရေးန်ထမ်းများအနေဖြင့်တောင်းပန်ခြင်းတုံ့ပြန်သည့် Burgundian ခေါင်းဆောင် 1430 သို့မဟုတ်အစောပိုင်း 1431 ခုနှစ်တွင် - အင်္ဂလိပ်လက်၌ခဲ့ပြီးသော - သူမ၏ကျော်သန်နှင့်သူမ၏ဖြစ်နိုင်သောယူဖောက်ပြန်ဘို့စမ်းသပ်ပေါ်တွင်တင်ရှိသည်, အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှဂျုံးကိုရောင်း သူဘုရားကျောင်းသူမ၏အပ်ပေးတော်မူ၏။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ်ခုအင်္ဂလိပ်ဝန်ထမ်းများနှင့်ပြင်သစ်ပေါ်တွင်အင်္ဂလိပ်တောင်းဆိုမှုများအပေါ်သစ္စာဘာသာရေးယောက်ျားနှင့်အတူမြို့ကျင်းပ, Rouen မှာအရပျကိုယူခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ပြင်သစ်၏ Vice-inquisitor စီရင်ခြင်းကိုခံရဖို့ဖြစ်တယ်, သူဖမ်းမိခဲ့ရှိရာ diocese ၏ဆရာတော်၏အပေါင်းပဲရစ်တက္ကသိုလ်ကနေယောက်ျား။ ဂျုံးရဲ့စမ်းသပ်မှုသူမသည်အနာဂတ္တိများနှင့်မိမိကိုယ်ကိုအဘို့ဘုရားသခငျ့အခွင့်အာဏာဟုဆိုကာအပါအဝင်သဘာဝအကြီးအကျယ်အယူမှားနှင့်အစော်ကားခုနစ်ဆယ်ပြစ်မှုများ, ဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်ဖေဖော်ဝါရီလ 21 1431. အပေါ်စတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်နောက်ပိုင်းတွင်တဆယ်နှစ်လုံးကိုသော့ချက် '' ဆောင်းပါးများ '' လျှော့ချခဲ့သည်။ ဒါဟာ "အလယ်အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ကောင်းအကောင်းဆုံးကိုမှတျတမျးတငျထားယူဖောက်ပြန်ရုံးတင်စစ်ဆေး" (တေလာ, Arc ၏ဂျုံး, မန်ချက်စတာ, p ။ 23) ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဘုရားကျောင်းဆက်ဆက်ဂျုံးဟာဘုရားသခင်ထံမှမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိမခံခဲ့ရကြောင်းသက်သေပြခြင်းဖြင့်၎င်းတို့၏အျောသိုဒေါအားဖြည့်ဖို့လိုခငျြသူတို့ကိုယ်တိုင်အနက်ကိုဘော်ပြမှတစ်ဦးတည်းသောညာဘက်ပြောဆိုထားသည်နှင့်သူမ၏ဆေးမေးမွနျးဖြစ်ကောင်းစစ်မှန်စွာသူမတစ်ဦးယူမှားသူအဖြစ်ဖြစ်ခဲ့သည်ယုံကြည်ခဲ့ဘူးပေမယ့်ဒီရုံဘာသာရေးရုံးတင်စစ်ဆေးမဟုတ်ခဲ့ ။ နိုင်ငံရေးအရသူမကအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြရသည်။ အင်ျဂလိဆိုပါတယ် ဟင်နရီ VI ကိုရဲ့ ပြင်သစ်ရာဇပလ္လင်ပေါ်မှာပြောဆိုချက်ကိုဘုရားသခငျသညျကအတည်ပြု, နဲ့ Joan ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျအင်ျဂလိမျှတမှုကိုစောင့်ရှောက်ရန်မမှန်သောဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာအစတစ်အပြစ်ရှိကြောင်းစီရင်ချက်ပြီးသားအင်္ဂလန်ကိုပြန်သူတို့ရဲ့ဝါဒဖြန့်အတွက်အကဲဆတ်သောလင့်များအောင်ထံမှကျင်းပသော်လည်း, မျှောဆရာနှင့်အတူ consorting ခံရဖို့ကောလဟာလသတင်းများအရသူချားလ်စ်, ထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။
ဂျုံးအပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးတစ်ခုအယူခံငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအဂျုံးမှာသူမဘဝထောင်ဒဏ်ခဲ့သောပြီးနောက်သူမ၏ဒုစရိုက်ဖြေကိုလက်ခံခြင်းနှင့်အသင်းတော်သို့ပြန်ကြွလာ abjuration တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်သူမ၏အသံကိုနိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုများ၏သူမ၏စွပ်စွဲသည်ဟုဆို, သူမ၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲသွား, သူအခုပြန်ရောက်သွားတယ်ယူမှားသူအဖြစ်ဖြစ်ခြင်း၏အပြစ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထုံးစံခဲ့, သူသည်မေလ 30 ရက်နေ့ကိုမီးရှို့ခံရသဖြင့်ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရပါတယ်အဖြစ်အဆိုပါဘုရားကျောင်း, Rouen အတွက်လောကအင်္ဂလိပ်တပ်ဖွဲ့များမှသူမ၏လက်သို့အပ်။ သူမသည်ဖြစ်ကောင်း 19 ခဲ့သည်။
အင်္ဂလိပ်တစ်ကျော့ပြန်လာချားလ်စ် check လုပ်ထားနှင့် Burgundians, ဂျုံးပြီးနောက်အခြားအနှစ်နှစ်ဆယ်လုယူသောချားလ်စ် '' အောင်ပွဲအတွက်တစ်ခုတည်းအရေးအပါဆုံးအဖြစ်အပျက်, နှစ်ဖက် switched သည်အထိအကျပ်အတည်း, တစ်ဦးနှစ်အနည်းငယ်ဘို့လာတော့သည်။ ဘယ်အချိန်မှာလုံခြုံ, စစ်ပွဲရဲ့အဆုံးမှာ, ချားလ်စ်ဂျုံးရဲ့ဝါကျနောက်ဆုံးမှာ 1456. ခုနှစ်ရာဂျုံးသူမ၏လှုံ့ဆော်မှုထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိရှိပါတယ်အဖြစ်စစ်ပွဲအမြဲအခြေအတင်ဆွေးနွေးထားပြီးယင်းအနှစ်တရာ၏ဒီရေကိုပြောင်းလဲကူညီပေးခဲ့သည်မှအတိအကျအတိုင်းအတာဿဟာယပျက်ခဲ့သောကတဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်စတင် သာအနည်းငယ်အဆင့်မြင့်စစ်သားများ, ဒါမှမဟုတ်တိုက်ပွဲဝင်၏အဓိကကိုယ်ထည်။ အမှန်စင်စစ်သူမ၏သမိုင်းအများစုရှုထောင့်ထိုကဲ့သို့သောချားလ်စ်ပထမဦးဆုံးဌာန၌သူမ၏စကားကိုနားထောင်, ဒါမှမဟုတ်ရည်မှန်းချက်ကြီးမှူးမတ်ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးမျှတမှုအဖြစ်သူမ၏အသုံးပြုသောရှိမရှိအဘယ်ကြောင့်အဖြစ်, ငြင်းခုံဖို့ပွင့်လင်းကြသည်။
အရာတစ်ခုမှာရှင်းပါတယ်: သူမ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုပြင်သစ်ဝိညာဏ်တစ်ခုဂျ, လိုအပ်ကြောင်းကာလမှဖွင့်မယ့်ပုံဖြစ်လာ, သူမသေဆုံးပြီးကတည်းကအလွန်တရာစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ သူမသည်ယခုအခါသူမ၏စစ်မှန်သောအောင်မြင်မှုတွေ overstated ရှိမရှိ, ပြင်သစ်ရဲ့သမိုင်းအတွက်မျှော်လင့်ချက်၏အရေးပါသော, တောက်ပယခုအချိန်တွင်အဖြစ်ရှုမြင်နေသည် - သူတို့မကြာခဏ -or မဖြစ်သကဲ့သို့။ ပြင်သစ်မေလတွင်ဒုတိယတနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းနှင့်အတူသူမ၏အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့။ သို့သော်သမိုင်းပညာရှင်Régine Pernoud ကဆက်ပြောသည်: "ဘုန်းကြီးသောစစ်ရေးသူရဲကောင်းများ၏ရှေ့ပြေးပုံစံ, ဂျုံးဟာဓားစာခံများ၏နှင့်ဖိနှိပ်မှု၏သားကောင်များ၏လည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရှေ့ပြေးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ " (Pernoud, trans ဆိုတဲ့အဒမ်, Arc ၏ဂျုံး, Phoenix မြို့ Press မှ 1998 ။ , p ။ XIII)
Thetis: မင့်ကဂရိ Nymph
Menes - အဲဂုတ္တုပြည်ပထမဘုရငျ
ဖိလစ်ပိုင် Emilio Jacinto
ဗစ်တာ Vasarely, အကအေဲနျဂြီအနုပညာလှုပ်ရှားမှု၏ခေါင်းဆောင်
မြေကြီးတပြင် Day ကို print ထုတ်လို့ရတဲ့
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: ဗိုလ်ချုပ်ယောဟနျသ McClernand
Cambrai များ၏အဖွဲ့ချုပ်စစ်ပွဲ: Flodden ၏တိုက်ပွဲ
အဆိုပါ Lexical ချဉ်းကပ်ဆိုတာဘာလဲ
Redstone ရော့ကက်: အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးသမိုင်းတစ် Piece
Taliesin, ဝလေ Bard ၏ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်
ဒုတိယသမ္မတမိုက်ကယ် "သူ Mike" Pence ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ profile
ရောမအင်ပါယာ: အ Teutoburg သစ်တောများ၏တိုက်ပွဲ
သြဇာလွှမ်းမိုးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, ဒဏ်ဍာရီ: Edvard Munch ဖြစ်လာခြင်း
တရုတ် Toast Make ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ
လူမှုဗေဒအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ် Lambda နှင့် Gamma